7 an-trano * 10W Mini LED Moving Head Light - vaovao & Ny hery sy ny vokatra dia ampiasaina betsaka amin'ny hetsika lehibe sy antonony isan-karazany
an-trano an-trano an-trano an-trano 7 an-trano * 10W Mini LED Moving Head Light
7 an-trano * 10W Mini LED Moving Head Light
Jiro LED 100W COB manjaitra ny mpihaino Surface Light Par Light： Jiro LED 100W COB manjaitra ny mpihaino Surface Light Par Light
Electronic Dimming: 0% Jiro LED 100W COB manjaitra ny mpihaino Surface Light Par Light 100%
Jiro LED 100W COB manjaitra ny mpihaino Surface Light Par Light: L28*W24*H27 cm
fametrahana mazava tsara: 4.2Jiro LED 100W COB manjaitra ny mpihaino Surface Light Par Light
an-trano 2008, an-trano, an-trano. an-trano, an-trano, an-trano.
Ny vokatra lehibe amin'ny orinasa dia ny jiro mihetsika, Ny vokatra lehibe amin'ny orinasa dia ny jiro mihetsika, Ny vokatra lehibe amin'ny orinasa dia ny jiro mihetsika, Ny vokatra lehibe amin'ny orinasa dia ny jiro mihetsika, Ny vokatra lehibe amin'ny orinasa dia ny jiro mihetsika, Ny vokatra lehibe amin'ny orinasa dia ny jiro mihetsika, Ny vokatra lehibe amin'ny orinasa dia ny jiro mihetsika, L, [object Window]. Ny vokatra dia nahazo patanty teknika maromaro sy fanamarinana kalitao iraisam-pirenena.
L: Ny baiko ODM dia raisina am-pitiavana. manana ny milina fanontam-pirinty laser izahay, Ny baiko ODM dia raisina am-pitiavana. manana ny milina fanontam-pirinty laser izahay.L : Where is your factory located ? How can I visit your factory ?
L : ary azonao atao koa ny mangataka anay handefa PI ho anao mba hankatoavanao. Mila mahafantatra ireto fampahalalana manaraka ireto izahay momba ny baiko , ary azonao atao koa ny mangataka anay handefa PI ho anao mba hankatoavanao. Mila mahafantatra ireto fampahalalana manaraka ireto izahay momba ny baiko , ary azonao atao koa ny mangataka anay handefa PI ho anao mba hankatoavanao. Mila mahafantatra ireto fampahalalana manaraka ireto izahay momba ny baiko , ary azonao atao koa ny mangataka anay handefa PI ho anao mba hankatoavanao. Mila mahafantatra ireto fampahalalana manaraka ireto izahay momba ny baiko , then you need to pay the freight to us .（Talk in detail）